မမှနျရငျ လြှာအဖွတျခံရဲပါတယျဆိုတဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ဖွဈလာမယျ့ ဗဒေငျ ဟောစာတမျးမြား -
HomeFUNNYမမှနျရငျ လြှာအဖွတျခံရဲပါတယျဆိုတဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ဖွဈလာမယျ့ ဗဒေငျ ဟောစာတမျးမြား
February 10, 2020 Alinn Pya FUNNY 0
(1) ဇနျနဝါရီ …
ဇနျနဝါရီလမှာ မှေးဖှားသူတှကေတော့ ထူးထူးခွားခွား တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပဲ သူတို့ရဲ့မှေးနဟေ့ာ ၁ လပိုငျးအတှငျး ကရြောကျမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ လမျးလြှောကျရငျ ဘယျတဈလှမျး၊ ညာတဈလှမျး လြှောကျကွသူမြား ဖွဈကွပွီး ရမြေားမြားသောကျရငျ သေးမြားမြားပေါကျတတျတာကိုတော့ သတိထားပေးပါ .. ။
(2) ဖဖေျောဝါရီ …
ဖဖေျောဝါရီလမှာ မှေးဖှားသူတှဟော နှဈတှကွောလာတာနဲ့အမြှ အသကျတှေ ကွီးကွီးလာတတျပွီး ၂၀၂၀ အတှငျးမှာတော့ ထမငျးစားပွီးတိုငျး ဗိုကျမဆာတတျကွတဲ့ သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဆောရနျ၊ ရှောငျရနျတှကေတော့ ကားလမျးကူးရငျ ဘယျကွညျ့၊ ညာကွညျ့၊ ဘယျပွနျကွညျ့၊ ညာပွနျကွညျ့ ပွီးရငျကူးဆိုတဲ့ ယတွာလေးကို ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျနျော …. ။
(3) မတျ …
မတျလမှာမှေးဖှားသူတှကေတော့ မှေးလနာမညျနဲ့ တိုကျဆိုငျစှာပဲ လမျးလြှောကျရငျ မတျတပျအရငျ ထရပျကွတဲ့ သူမြိုးဖွဈပါတယျ။ သူတို့တှဟော နပေူထဲအထှကျမြားတာမြိုး၊ ကမျးခွပေငျလယျတှမှော ရကေူးတာမြိုးပွုလုပျမိရငျ အသားမဲတတျတာမို့ အသားမမဲခငျြရငျတော့ အဲ့ဒီအခကျြတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျနျော … ။
(4) ဧပွီ …
ဧပွီလမှာ မှေးဖှားသူတှဟော အမြားအားဖွငျ့ ခေါငျးမှာဆံပငျပေါကျတတျပွီး နားရှကျတှဟော ဘယျတဈဖကျ၊ ညာတဈဖကျသာ ရှိကွပါတယျ။ ရသေောကျမြားပါက ရှုရှုးပေါကျရငျ အဝေးကွီးရောကျတတျတဲ့ လူစားမြိုးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ … ။
(5) မေ …
မလေမှာ မှေးဖှားသူလို့ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲ သူတို့တဈဦးခွငျးဆီမှာ ကိုယျပိုငျအမတေဈဦးဆီ ရှိကွပါတယျ။ ဘတျဈကားစီးရငျ အပေါကျဝနားပိတျမရပျပါနဲ့၊ စပယျရာဟောကျတာကို ခံရတတျသလို၊ တဈခါတဈရံမှာ အကွှလေညျး ပွနျအမျးမခံရပါဘူးနျော … ။
(6) ဇှနျ …
ဇှနျလမှာ မှေးဖှားသူအားလုံးလိုလိုဟာ ဘယျလောကျပဲ ရာထူးကွီးကွီး အိမျသာတတျရငျ ဖငျလှနျတကျကွရပါတယျ။ အိမျသာတကျပွီး ဖငျမဆေးရငျတော့ ဖငျဝဲပေါကျတတျသလို၊ ကိစ်စပွီးရငျ ရလေောငျးဖို့ မမသေ့ငျ့ဘူးနျော … ။
(7) ဇူလိုငျ …
ဇူလိုငျလမှာ မှေးဖှားသူတှဟော ငယျငယျတုနျးက အိပျယာပျေါမှာ ရှုရှုးပေါကျခခြဲ့ဖူးတဲ့ သူတှဖွေဈကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့သှေးတှဟော အနီရောငျရှိပွီး သူတို့ကို အမှောငျခနျးထဲ ထညျ့ထားပါက မဲမဲမဲမဲသာ မွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ … ။
(8) သွဂုတျ …
သွဂုတျလမှာ မှေးဖှားသူတှကေတော့ ဝေးဝေးပွေးရငျမောတတျပွီး ထိုငျနပွေနျတော့လညျး ခုံနဲ့ဖငျနဲ့ ကပျနတေတျပါတယျ။ သူတို့ရှာထား ဖှထေားသမြှ ငှတှေဟော သုံးလိုကျရငျ ကုနျကုနျသှားတတျတာမို့ စိတျညဈရတတျပါတယျ။အဲ့တာတော့သတိထားပေးပါ … ။
အိပျလိုကျတိုငျး မကျြစိမှိတျမှိတျသှားတာက စကျတငျဘာမှေးနရှေ့ငျတှပေါ။ ထမငျးတှဟော စားလိုကျတိုငျး ဗိုကျထဲရောကျရောကျသှားတတျပွီး ထမငျးတဈခါစားရုံနဲ့ မပွီးပဲ နောကျနကြေ့ ထပျစားရပွနျပါတယျ … ။
အောကျတိုဘာလ မှေးနရှေ့ငျတှနေဲ့ ၁၀ လပိုငျး မှေးနရှေ့ငျတှဟော အတူတူပဲဆိုတာကို ပွောလိုကျရငျ မအံ့သွသှားပါနဲ့။ အဲ့ဒါတဈကယျပါ။ သူတို့ဟာ ငယျငယျတုနျးက သေးသေးလေး ဖွဈကွပွီး ကွီးလာတော့ တဖွညျးဖွညျး ကွီးလာကွပါတယျ။ (ကိုယျခန်ဓာကိုပွောတာပါနျော)
နိုဝငျဘာလ မှေးနရှေ့ငျတှထေဲက အမြိုးသားတှဟော ယောကျြားလေးတှဖွေဈကွပွီး အမြိုးသမီးတှကေတော့ မိနျးကလေးတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ယောကျြားလေးတှဟော ကလေးမမှေးနိုငျကွပဲ၊ မိနျးကလေးတှသော မှေးနိုငျကွလေ့ ရှိပါတယျ … ။
နှဈတဈနှဈရဲ့ နောကျဆုံးလမှာ မှေးဖှားသူတှေ ဖွဈကွပွီးတဈနှဈမှ တဈခါမှေးနလေု့ပျနိုငျကွသူတှပေါ။ ပကျလကျအိပျရငျ ကြောနဲ့မှယေ့ာကပျနတေပျပွီး မှောကျရပျအိပျရငျ ဗိုကျနဲ့မှယေ့ာကပျနမှောပဲဖွဈပါတယျ … ။
မမှန်ရင် လျှာအဖြတ်ခံရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ ၂၀၂၀ မှာ ဖြစ်လာမယ့် ဗေဒင် ဟောစာတမ်းများ
(1) ဇန်နဝါရီ …
ဇန်နဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေကတော့ ထူးထူးခြားခြား တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ဟာ ၁ လပိုင်းအတွင်း ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လမ်းလျှောက်ရင် ဘယ်တစ်လှမ်း၊ ညာတစ်လှမ်း လျှောက်ကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး ရေများများသောက်ရင် သေးများများပေါက်တတ်တာကိုတော့ သတိထားပေးပါ .. ။
(2) ဖေဖော်ဝါရီ …
ဖေဖော်ဝါရီလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ အသက်တွေ ကြီးကြီးလာတတ်ပြီး ၂၀၂၀ အတွင်းမှာတော့ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ဗိုက်မဆာတတ်ကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆောရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကတော့ ကားလမ်းကူးရင် ဘယ်ကြည့်၊ ညာကြည့်၊ ဘယ်ပြန်ကြည့်၊ ညာပြန်ကြည့် ပြီးရင်ကူးဆိုတဲ့ ယတြာလေးကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော် …. ။
(3) မတ် …
မတ်လမှာမွေးဖွားသူတွေကတော့ မွေးလနာမည်နဲ့ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ လမ်းလျှောက်ရင် မတ်တပ်အရင် ထရပ်ကြတဲ့ သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ နေပူထဲအထွက်များတာမျိုး၊ ကမ်းခြေပင်လယ်တွေမှာ ရေကူးတာမျိုးပြုလုပ်မိရင် အသားမဲတတ်တာမို့ အသားမမဲချင်ရင်တော့ အဲ့ဒီအချက်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်နော် … ။
(4) ဧပြီ …
ဧပြီလမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ အများအားဖြင့် ခေါင်းမှာဆံပင်ပေါက်တတ်ပြီး နားရွက်တွေဟာ ဘယ်တစ်ဖက်၊ ညာတစ်ဖက်သာ ရှိကြပါတယ်။ ရေသောက်များပါက ရှုရှုးပေါက်ရင် အဝေးကြီးရောက်တတ်တဲ့ လူစားမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။
(5) မေ …
မေလမှာ မွေးဖွားသူလို့ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ သူတို့တစ်ဦးခြင်းဆီမှာ ကိုယ်ပိုင်အမေတစ်ဦးဆီ ရှိကြပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားစီးရင် အပေါက်ဝနားပိတ်မရပ်ပါနဲ့၊ စပယ်ရာဟောက်တာကို ခံရတတ်သလို၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အကြွေလည်း ပြန်အမ်းမခံရပါဘူးနော် … ။
(6) ဇွန် …
ဇွန်လမှာ မွေးဖွားသူအားလုံးလိုလိုဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ရာထူးကြီးကြီး အိမ်သာတတ်ရင် ဖင်လှန်တက်ကြရပါတယ်။ အိမ်သာတက်ပြီး ဖင်မဆေးရင်တော့ ဖင်ဝဲပေါက်တတ်သလို၊ ကိစ္စပြီးရင် ရေလောင်းဖို့ မမေ့သင့်ဘူးနော် … ။
(7) ဇူလိုင် …
ဇူလိုင်လမှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ယာပေါ်မှာ ရှုရှုးပေါက်ချခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သွေးတွေဟာ အနီရောင်ရှိပြီး သူတို့ကို အမှောင်ခန်းထဲ ထည့်ထားပါက မဲမဲမဲမဲသာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
(8) သြဂုတ် …
သြဂုတ်လမှာ မွေးဖွားသူတွေကတော့ ဝေးဝေးပြေးရင်မောတတ်ပြီး ထိုင်နေပြန်တော့လည်း ခုံနဲ့ဖင်နဲ့ ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရှာထား ဖွေထားသမျှ ငွေတွေဟာ သုံးလိုက်ရင် ကုန်ကုန်သွားတတ်တာမို့ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တာတော့သတိထားပေးပါ … ။
အိပ်လိုက်တိုင်း မျက်စိမှိတ်မှိတ်သွားတာက စက်တင်ဘာမွေးနေ့ရှင်တွေပါ။ ထမင်းတွေဟာ စားလိုက်တိုင်း ဗိုက်ထဲရောက်ရောက်သွားတတ်ပြီး ထမင်းတစ်ခါစားရုံနဲ့ မပြီးပဲ နောက်နေ့ကျ ထပ်စားရပြန်ပါတယ် … ။
အောက်တိုဘာလ မွေးနေ့ရှင်တွေနဲ့ ၁၀ လပိုင်း မွေးနေ့ရှင်တွေဟာ အတူတူပဲဆိုတာကို ပြောလိုက်ရင် မအံ့သြသွားပါနဲ့။ အဲ့ဒါတစ်ကယ်ပါ။ သူတို့ဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက သေးသေးလေး ဖြစ်ကြပြီး ကြီးလာတော့ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာကြပါတယ်။ (ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြောတာပါနော်)
နိုဝင်ဘာလ မွေးနေ့ရှင်တွေထဲက အမျိုးသားတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသမီးတွေကတော့ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကလေးမမွေးနိုင်ကြပဲ၊ မိန်းကလေးတွေသာ မွေးနိုင်ကြလေ့ ရှိပါတယ် … ။
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးလမှာ မွေးဖွားသူတွေ ဖြစ်ကြပြီးတစ်နှစ်မှ တစ်ခါမွေးနေ့လုပ်နိုင်ကြသူတွေပါ။ ပက်လက်အိပ်ရင် ကျောနဲ့မွေ့ယာကပ်နေတပ်ပြီး မှောက်ရပ်အိပ်ရင် ဗိုက်နဲ့မွေ့ယာကပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
လူတိုငျး အိမျတိုငျး ဒီလိုနေ ဒီလိုလုပျရငျ ဘုနျးကံနိမျ့ လာဘျတိတျစပွေီး ဆိုးကြိုးမြားဖွဈလာနိုငျ
အစှမျးထကျသော ဘုရား မကျြနှာသဈရတေျော ကငျြ့စဉျကပျနညျး